Valheim: mutambo wevhidhiyo unonakidza wakagadzirwa kubva kuLinux | Linux Vakapindwa muropa
Valheim mutambo unonakidza wevhidhiyo nerutsigiro rweLinux uye yakavakirwa pamusoro wenyaya wekupona uye kuongorora mune yakavhurika nyika, iine mukana wevazhinji vatambi vemitambo. Zvese zvakagadzwa mutsika yeViking mairi kuti unyurudze kurwa, kukunda uye kuongorora.
Asi kunze kwaizvozvo, budiriro iyi de Gedhi reSimbi AB yakakoshawo kune chimwe chikonzero. Uye yakagadzirirwa kushandisa Linux. Izvi zvinoratidza kuti kwete chete macOS neWindows zvinogona kuve mapuratifomu ekuvandudza emitambo yemavhidhiyo. Chero ani anoda kugadzira kubva kuGNU / Linux anogona kuzviita neese maginjini enjini uye zvishandiso zvatovepo.
Sezvauri kuona, zita iri rinotovimbisa, saka avo vanofunga kuti Linux haisi chikuva chakanaka chebudiriro vhidhiyo vatambi vemitambo vakanganisa sekudzidza uku kwekuSweden kwakaratidza. Mune ino kesi, iyo Unity graph injini yakashandiswa, iyo, sekuziva kwako, inowanikwa kune vanogadzira kuti vashandise kubva kuLinux.
Uye nenzira, zvisinei nazvo, kana iwe uri mutambi uye uchida zita iri, iwe unofanirwa kuzviziva izvo kumwe kuburitswa kwaburitswa pamwe nekugadziriswa uye inonakidza nhau: grafiki gadziriso, zvakagadziriswa zvikanganiso, kugadzirisa mune dzimwe mhuka uye mavara, pamwe nezvimwe zvezvimwe zvikepe, terrain, simba remvura, uye optimization kushandisa shoma huwandu hwe RAM.
Tora mutambo wevhidhiyo Valheim - Chitoro cheValve's Steam
Rumwe ruzivo nezve iye anovandudza - Iron Gate AB Yepamutemo Webhusaiti
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Valheim: mutambo wevhidhiyo unonakidza wakagadzirwa kubva kuLinux
Sei ndisingakwanise kuridhawunirodha?
Ini handioni kuti paSteam mutambo unotsigirwa natively paLinux: https://i.imgur.com/UwWABk5.png